Duqeyn ka dhacday degaano katirsan Mudug iyo khasaaro ka dhashay | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Duqeyn ka dhacday degaano katirsan Mudug iyo khasaaro ka dhashay
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya duqeyn ka dhacday Barqanimadii saaka ka dhacday inta u dhaxaysa Qaycad iyo degmada Xarardheere, waxaana wararka aan helnay ay sheegayaan in la beegsaday Saldhig ay Al-shabaab ku lahaayeen degaankaasi.
Wararkuw axaa ay tilmaamayaan in duqeyntu ay ahayd labo gantaal oo kuwa diyaaradaha laga rido ah, waxaana la sheegayn in duqeynta ka dib ay Ciidanka Dowladda iyo kuwo Galmudug oo is garabsanaya ay gudaha u galeen goobta la duqeyay.
Dadka degaanka ayaa soo warinaya in ay maqlayeen jugta duqeynta oo sida ay sheegeen ay diraadi fulisay, waxaana sidoo kale ay intaas ku dareen dadka degaanku in aysan xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay.
Wali saraakiisha Ciidanka horkacaysa kama hadlin dhacdaadaasi, sidoo kalena ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka Al-shabaab oo ay kaga hadleen duqeyntaasi la sheegay in ay ka dhacday inta u dhaxaysa Qaycad iyo degmada Xarardheere.
Maqaal horeSarkaal ka tirsanaa Booliska Somaliland oo lagu dilay Gobolka Sanaag
Maqaal XigaFaah faahin kasoo baxeysa Shil khasaaro dhaliyey oo ka dhacay Somaliland